Ogaden News Agency (ONA) – Wararka Jaaliyada Ogadeniya ee Victoria: Casho Sharaf iyo Qaabki quruxda badnaa ee Jaaliyada Victoriya u ciideen halkan ka daawo
Wararka Jaaliyada Ogadeniya ee Victoria: Casho Sharaf iyo Qaabki quruxda badnaa ee Jaaliyada Victoriya u ciideen halkan ka daawo
Posted by ONA Admin	/ October 28, 2013
Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria oo ah jaaliyad aad u xoogbadan ayaa Qormadan hoose kusoo qaadanayna warbixino la xidhiidha qaabkii quruxda badnaa ee Jaaliyada Ogadeniya ee Victoria Ciidi Al Adxa isugu yimaadeen iyo Ururka Dhalinyarada Ogadeniya ee OYSU Victoria oo Casho sharaf u sameeyay xubno booqasho ku yimid gobolkaas.
Jaaliyada Wadanka Australia oo caan ku ah in maalmaha ciida banaanka isugu soobaxaan, ayaa waxaa xasuus mudan yawmul farxadkii Ciida Al-Adxa oo Jaaliyada Ogadeniya ee Victiroya ay kulan isugu yimaadeen barxad weyn. Halkaas oo dhamaan xubnaha Jaaliyada oo ka kooban caruurtii, waayeelki, haweenki iyo qoyasaskii oo dhan ay isugu yimaadeen. Farxadan ciideed waxaa garab socday astaan kale oo muujinaysa awooda jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Gobolka Victoriya iyaga halkaas kusoo bandhigaya astaamaha halganka shacabiga Ogadeniya. Waxaad arkeysaa caruur badan oo labarayo Qadiyada Ogadeniya, Calanka iyo halku dhagyada ay ku dhisantahay ama ka duulaan xaqu dirirka JWXO.
Xafladan Ciida waxaa gacanweyn ka geystay Ururka Dhalinyara OYSU Melbourne. Waxaa xafladaas lagu qabtay Yarraville Park oo ah goobta loogu talagalay dadweeynaha dagan gobalka Victoria in ey ku qabsadaan xaflada lagu magacdaray (BBQ).
Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaalida Ogadenia ee Victoria Halgame Abdi Hussein ( Hikim) ayaa soodhaweeyey dhamaan bulshada ka soqeybgashay xafladaas, una faray hambalyo cideed shacab waynaha Soomaalida reer Ogadenia iyo dhamaan umada muslimiinta meel kasta oo ay joogaan.
Gudomiyaha ayaa xusay dhibaatada gumeysi ee maalinta ciida la dareemo, isaga oo sheegay in kumanaan kun oo jeelasha gumeysiga ku jira aysan nasiib u yeelanin inay la ciidaan ehelkooda, iyo qoyskooda, maxbuusiintaas jeelasha kujira oo intooda badan aanba nolol iyo geeri loogawarqabin midaas oo xanuun gooni ah kusii reebta shacabiga Ogadeniya. ka sokow hadaladaas guubaabada ah iyo xasuusinta xaalada ay kusuganyihiin shacabiga Ogadeniya. Waxaa farxadan ciidu sidoo kale ay wadatay dareen kale oo farxadeed iyada oo lagu muujiyay guulaha halganka Ogadeniya ee maalinkasta ay soo hooynayaan ciidanka qalabka sida ee jiida hore kujira difaacayana ciideena hooyo.
Maalintaan ayaa fursad u aheyd dhamaan bulshada kasoqeybgay, farxadna kawada muqatay. Waxaa kaloo fursad u aheyd malintaan dhamaan hooyooyinka iyo aabayaasha oo fursad u helay ilmahooda maaweelo kala duwan in ay helaan islamarkaasna ay bartaan farxada ay leedahay Ciida Islaamka uguweyn.
Gabagabadii xafladaan ayaa ku dhamaatay si farxaad ah.
Sidookale waxaa Gobolka Victoriya ka dhacay munaasabad Casho sharaf loogu sameeyay xubno kamid ah ururka dhalinyarada OYSU Perth oo safar kusoo gaadhay magaalada Melbourn. Casho sharaftan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay Ururuka OYSU ee Melbourn.